မီးလောင်မှုသတင်း Archives - Page 30 of 146 - Myanmar Fire Services Department
House Fire at Ywarthitdammin Village, Andim Village Tract, Ye Township, Mon State
editor | Aug 28, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
27.8.2020 at about 18:30 – house fire broke out by the owner U Ni Myo (40’×10′) house at Ywarthitdammin Village, Andim Village Tract, Ye Township, Mon State. The fire started while smoked the fish at the fish shelf and spread to the house. The fire was...
House Fire at Bothekone Village, Shwepankone Village Tract, Watlat Township, Sagaing Region
27.8.2020 at about 06:35 – house fire broke out by the owner U Cho Win (15’×20′) house at Bothekone Village, Shwepankone Village Tract, Watlat Township, Sagaing Region. The fire started from the owner U Cho Win who is mental patient burned his house using...
Car Fire beside Red Bar restaurant, Myopat Road, Sansai (B) Yard, Tachileik Township, Shan State
27.8.2020 at about 04:30 – car fire broke out by the owner at U Sai Aung Kham TOYOTA CROWN Car beside Red Bar restaurant, Myopat Road, Sansai (B) Yard, Tachileik Township, Shan State. The fire started from the owner U Sai Aung Kham who burned the car with gas...
Gas Leaking that connected from Insein-Ywarma to Shwepyithar , beside pearl Road, in front of (MEC) Tyre Factory, Aungsan Yard, Insein Township, Yangon Region
editor | Aug 27, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
26.8.2020 at about 08:00- gas pipe leaked and occurred flame that connected from Insein-Ywarma to Shwepyithar beside pearl Road, in front of MEC Tyre Factory, Aungsan Yard, Insein Township, Yangon Region. According to the report, at about 15:14- 25 fire services...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ်၊ တာမွေလေးရပ်ကွက်၊ သာယာရွှေပြည်လမ်းတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
editor | Aug 26, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၂၅.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၄ ၅၅ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ်၊ တာမွေလေးရပ်ကွက်၊ သာယာရွှေပြည်လမ်း၊ အမှတ်(၄၆/C)၊ ပိုင်ရှင် ဒေါ်ကျင်မြိုင် ၏ (၂၀x၄၀)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း(၁)ခန်း(၃)ထပ် နေအိမ်၏ ပထမထပ်တွင် လူစောင့်မရှိဘဲ ၃ မိနစ်ရေနွေးအိုး တည်ထားခဲ့ရာမှ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ်၊ တာမွေကြီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ ပင်ရွှေညောင်လမ်းတွင် ကားမီးလောင်မှုသတင်း
editor | Aug 25, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၂၄.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၄ ၄၃ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ်၊ တာမွေကြီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ ကျိုက်က္ကဆံလမ်းမှ ပင်ရွှေညောင်လမ်းဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဦးအောင်ထွန်းမြင့် မောင်းနှင်လာသော Hyundai Porter2အမျိုးအစား(အဖြူရောင်) မော်တော်ယာဉ်သည်...
Page 30 of 146« « Previous...1020...2829303132...405060...Next »